ရန်ကုန်တွင် ထန်းတပင်မြို့အနီးဗဟိုပြုပြီး အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်၊ ပြည်သူများ အထ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တွင် ထန်းတပင်မြို့အနီးဗဟိုပြုပြီး အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်၊ ပြည်သူများ အထ?
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃- ဇန်နဝါရီ ၁၃ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ တွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၃ ဒသမ ၉ အဆင့်ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ သော ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြို့ပေါ်နေပြည်သူများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
”အခု လှုပ်သွားတဲ့ငလျင်က အင်အားရစ်ခ်ျတာစကေး ၃ ဒသမ ၉ အဆင့်ရှိပါတယ်။ အင်အားသေးပေ မယ့်လည်း ရန်ကုန်မြို့ကဗဟိုချက် နဲ့ နီးတဲ့အတွက် သတိပြုမိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဘက်အခြမ်းတွေ က ပြတ်ရွေ့ကြောအသေးလေးတွေ ပဲရှိပါတယ်။ နာမည်လည်းမရှိပါ ဘူး”ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မြေငလျင် ဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါက်တာယဉ်မျိုးမင်း ထွေးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စမ်း ချောင်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ဒေါ် ဖြူဖြူက ”အင်အားရစ်ခ်ျတာစကေး ၃ ဒသမ ၉ အဆင့်ဆိုပေမယ့် တော်တော်ကိုသိသာပါတယ်။ ဘုရား သောက်တော်ရေခွက်ထဲက ရေတွေ တောင် ဖိတ်တယ်။ မှန်ရှိုးကေ့စ်က မှန်တွေတောင် အသံမြည်တယ်။တော်တော်ကိုသိသိသာသာ လှုပ် သွားတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးကလည်း ”ကျွန်မ တို့က ခြောက်ထပ်မှာနေတော့ ငလျင် ကိုပိုသိသိသာသာ ခံစားလိုက်ရ တယ်။ ကျွန်မတို့နေတဲ့ တိုက်ကြီး တော်တော်ခါသွားတာ၊ ပိုဆိုးတာ က တစ်နေ့ကတင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ ငလျင် ကလည်း သိသိသာသာဆိုတော့ ပိုပြီး ကြောက်လန့်မိတာပါ”ဟုပြော သည်။
မြန်မာ့ရွှေဈေး ယခုနှစ်အတွင်း ကျပ်ကိုးသိန်းအောက်သို့ ပြန်မကျဘဲ ထပ်မံမြင့်တက်နိုင်ဖွယ်ရှိ??
လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနည်းပြ ရော်ဂျာရိုင်နာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချ?